London: Weerarro argagixiso oo fiidnimadii xalay ka dhacay “London Bridge iyo Borough Market” – Kasmo Newspaper
London: Weerarro argagixiso oo fiidnimadii xalay ka dhacay “London Bridge iyo Borough Market”
Updated - June 4, 2017 3:48 am GMT
London (kasmo), Gaari cad oo nooca ganacsiga ah “Van” ayaa fiidnimadii xalay, 10:08 wakhtiga London ku jiiray dad lugaynayay dusha kaabadda “London Bridge” oo ka mid ah buundooyinka waaweyn ee magaalada London iyo Borough Market.
Weerarkan ayaa dhacaya wax in yar ka badan 2 bilood ka dib toogashadii ka dhacday Westminster Bridge, 22kii March ee Khalid Mascuud ku dilay dhowrka qof oo nin Boliis ahaa ku jiro.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya dadka oo kala cararaya iyaga oo jahwareersan, waxaana la maqlay dhawaaqa rasaasta iyo qaylo, halkaas oo Boliiska hubaysan iyo gurmadyada Ambalaastu si degdeg ah u soo gaareen, dariiqana laga xiray labada geesood.
Dad arkayay ayaa sheegaya in markii gaarigu dadka jiiray ay ka soo dageen dhowr nin, ka dibna mindi ay ku weerareen dadkii lugaynayay, waxaa la xaqiijiyay geerida 6 qof iyo 3dii nin ee weerarka soo qaaday oo Boliisku toogasho ku dileen. Mid ka mid ah waxaa oogadiisa ku xirnaa qasacado yaryar oo u ekaa suumanka qarxa ee la xirto oo been ah, (Sawirka hoose), si uu uga sii nixiyo dadweynaha.
Scotland Yard ayaa xaqiijisay in Boliisku ka hawlgaleen aagga Borough Market, 8 daqiiqo gudahooda, markii ay ku baxeen waxa ay u haystaan in uu yahay weerar argagixiso oo ka dhacay goobtaas oo ah suuq qaddiimi ah oo xitaa fiidnimadii laga adeegto oo ku dhow London Bridge.
Qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa ka warramaya dhaawacyada 30 qofood oo gaarigu jiiray, iyo 7 lagu dhaawacay mindiyaha oo 1 askari ku jiro, kuwaas oo loo kala guray 6 Isbitaal oo kala duwan oo ku yaalla caasimadda..
Weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo ayaa laga sheegayaa aagga “Vauxhall” oo an halkaasi ka fogayn, in kasta oo mar dambe la sheegay in uusan xiriir la lahayn weerarka London Bridge.
Dhammaadkii bishii May ayaa weerar argagixiso oo lagu qaaday Bandhig-faneedkii, fannaanadda da’da yar ee Maraykanka ah, Ariana Grande oo ka socday Manchester waxaa lagu dilay ilaa 22 qofood, waxaana lagu dhaawacay ku dhowaad 60 qofood.
Duqa London, Sadiq Khan ayaa cambaareeyay weerarka argagixiso oo loo gaystay dad an waxba galabsan, habeen Sabti ah oo dadku nasasho ku jiraan, waxaa kale oo cambaaraysay R/Wasaare Theresa May oo si joogto ah loola socodsiinayo dhacdada iyo qaar ka mid ah madaxda caalamka.
Theresa May oo markii shilku dhacayay ku sugnayd deegaanka laga soo doorto ee Maidenhead, waxay subaxnimada maanta oo Axad ah guddoomin doontaa kulanka Guddiga “Cobra” ee Nabadgalyada Qaranka, waxaana markii 2aad, 2 toddobvaad gudahood hakad galaya ololihii doorashooyinka 8da Juun.